Rustica - isitshalo
Emphakathini wethu, izwi elihlobene ne Shag ugwayi. Kodwa eqinisweni ngayo kwesinye isitshalo. Ngaphezu kwalokho, it is isetshenziswe kuphela ukubhema. Nakuba-ke nepepper ku amahlamvu powder neziqu asetshenziselwa womshini ugwayi, ukuhlafuna futhi isinemfu.
imbewu noGwayi kukhona womshini uwoyela upende nensipho izimboni. Futhi ngoba ukhiqiza nicotinic kanye citric acid. Ngaphezu kwalokho, ukulungiswa ugwayi asetshenziswe ezindaweni engadini ukuze kususwe izinambuzane. AmaNdiya lungiselela decoction ngakho, zokuyithena inyoka Isihlungu, ukuhlanza isilonda ezifweni. Labelaphi ulisebenzise okuzosha imimoya emibi. It uphendulela Shag - isitshalo esingazuzisa, hhayi nje ukumosha impilo yalabo ababhemayo.
Lapho uhlala futhi libukeka
Weza kithi ekuqaleni kwekhulu XVII. Ngaphambi kwalokho, kule Shag ukusabalala XVI ekhulwini eYurophu, lapho evela Florida. It wathola igama layo ngekhulu VIII. Izinto zokusetshenziswa kulesi simila inqwaba kubika emzini Dutch-Amersfoort, waba lapho powder ukubhema ngoba yonke iYurophu. Futhi eziphindaphindwa ibinzana "ugwayi kusukela Amersfoort" uguqulwa abe kakade ajwayelekile kithi egameni. Simila ezweni lethu eningizimu e indlela ephakathi nendawo, kanye e-Algeria, e-India, Poland, Tunisia, e-United States nakwamanye amazwe. I plant undemanding, futhi ingathatha impande nganoma iyiphi inhlabathi, kodwa okungcono yalo loamy, loamy, iziza podzolized ivundiswe organic. It has amahlamvu round nge link-free, resin surface futhi ephuzi noma izimbali ezimhlophe ijabulise nge iphunga okunoshukela. Njengoba-ke singafinyelela ubude obungamamitha 1 imitha. Rustica - isitshalo awukwazi ukubekezelela frost. Lufa ngisho at -2 degrees.
Nakuba thina zijwayele yokuthi ukubhema Shag labo abangenayo namandla ezezimali ukuba bathenge ugwayi ezibizayo, ngisho isithanda uPetro VIII ekhulwini I. nethimba lakhe bobukhosi ukuluthwa wabelane fun elimazayo. Ngakho-ke, ugwayi indawo ngibhema futhi amalungu esigaba engenhla, sikhethe izinhlobo ezahlukene zalesi sitshalo. Kodwa futhi litholakale kubantu abavamile babengenayo imali ngoba, ukuthenga izimpahla siphelile ukubhema. Ngakho-ke abantu abavamile ingashintshwa ukuze enze "Ukugoqekela phezulu". Ngenxa yale njongo izingcezu izicubu paper. Kancane kancane, ukuze sizuze abakhiqizi ngaphezulu ukubhema ingxube waqala ukukwenza hhayi aphume amaqabunga neziqu. Ngakho-ke, labo ayenamandla okukwenza kuhanjiswe ku ugwayi. Shag esebohlile ubala, ngoba impahla eluhlaza kusuka kulo manje uzilungiselele, equkethwe-nicotine ingasaphathwa. Namuhla, abantu ababhemayo nogwayi uthanda. Shag kodwa iqukethe inhlaka ayiyona ingozi kanye izithasiselo futhi ngaleyo ndlela kancane ingozi empilweni yomuntu. Yebo, futhi singabizi.
In the field, zama ukubeka ngemva okusabhontshisi, imifino, utshani zisetshenziswa, ummbila, okusanhlamvu ebusika, impande izitshalo. Inhlabathi kumele avundiswa ngempela nitrogen, phosphorus kanye potassium. Ukutshala kusakazeka yayo indlela noma nge izithombo. Imbewu emhlabathini is sehliselwe endaweni ka 1 cm, okuyinto esetshenziswa njengoba imila yomiswa ukunikeza isivuno ukujula, ngisho noma abanye babo uzofa kusukela izimo zemvelo ezingezinhle. Uma zonke izimo zifeziwe, ukwakheka kwamakhemikhali walesi sitshalo ngeke ukuhlangabezana namazinga, lokusho kutsi simo sakhe uzokwenza Shag okukhulu. Ekhaya, futhi, kungenziwa waziphatha kulinywe yayo kanye ukukhiqizwa izidingo zabo siqu.
Ukubeka Shag, kubalulekile ukukhetha imbewu yayo. Bona zingathengwa esitolo for balimi. Izinhlobo ezivamile ezibhekwa Pehlets zendawo, Pehlets 4, Datura 4. Makhorka - kuba linesizotha, kodwa hhayi ngenyanga ukumelana izitshalo, ngakho-ke uma watshala kuso ungahlelile efulethini futhi kuleyo nsimu, khetha efanele kokwehla ngenyanga. Kungaba enhle lapho band yakho akuyona ncamashi kunjalo frost, kusukela ngoMeyi. Ezindaweni ezibandayo, kubalulekile ukusebenzisa abamba ukushisa. Inhlabathi lapho sikhule Shag kufanele ikwazi ukuvunda bese oswakanyiswe. Ukwakheka Kubi nomhlabathi owomile ayivumeli ukuthola izinga okusezingeni eliphezulu izinto zokusetshenziswa.
Ukwenza ukutshalwa kagwayi ekhaya, akukuhle sokutshala izithombo etshalwe preformed. Ngakho, uzokwazi kahle hle ukuthi yiziphi izitshalo athile ayakwazi ukuqhubeka ephila, futhi akudingekanga balinde imbewu vskhozhdeniya ukuthi ingakulahlekela emhlabeni, nesikhathi elilungile zokutshala kuzobonakala. Le ndlu, sebenzisa amabhokisi noma izimbiza efakwe sill iwindi ohlangothini lwaseningizimu. imbewu amila siqale ngoMashi, kanti ngoMeyi kakade bakwazi ukutshala izithombo emhlabathini ngaphandle.
Basuke ezibekwe at ibanga 25 amasentimitha komunye nomunye. Land phakathi kwabo kufanele kube njalo okuxekethile, feed, ukuqeda ukhula. Ukunisela kufanele kube ezingavamile, kodwa luningi. Lapho izimbali endodaneni yabo. Ngokunakekela efanele kanye isitshalo ukuthi kungenziwa kuvuna in 70 days, kuyoba kuhle. Manje kubalulekile ukuze ome kahle izitshalo, oyi-ababebuthene zilandelane. Kusukela ngo-amahlamvu engezansi, bese uqhubekela nezinye kusukela phansi kuze. Beka ungqimba ngamasentimitha hhayi ningi than 30 futhi yagcinwa umthunzi amahora 12. Khona-ke, i-pre-omiswe ahlukaniswe intambo futhi hung endaweni evulekile, uvikelekile ezintweni indawo imvula amasonto ama-2. Ngemva kwalokho ikhishiwe ukusuka izindophi ibekwe endlini ekwindla. Khona-ke nje kufanele ugaye izinto zokusetshenziswa futhi isetshenziselwe izidingo zabo.
Rustica - isitshalo ehlenga abantu bethu ezikhathini ezinzima. Futhi manje ukukwenza kulinywe bazimisele ngaphandle impahla kanye nezindleko ngokomzimba ukuze uthole egcwele ukubhema inhlanganisela ezahlukene izinga kusukela osikilidi uthengelwe kangcono.
Ngakho Ukucabanga khona. Rene Dekart: "Ngicabanga, ngalokho ngiphakamisile khona"
Indlela yokuthola ebhizinisini elifana? Kanjani ukuze uthole umsebenzi wakho ozithandayo?
Sea Side Resort & Spa 5 * (eKrethe, Greece): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Inna Druz. Biography. ukuphila Siqu. "Yini? Kuphi? Nini? "